Semalt: के Google एनालिटिक्स स्प्याम हानिकारक छ?
गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा स्पाम एक साधारण समस्या हो जुन सधैं दुई फरक प्रकारहरूमा आउँदछ: बोट रेफरल स्प्याम र भूत रेफरल स्प्याम। इभान कोनोवालोभ, Semalt विज्ञ, बोट रेफरल स्प्याम तपाईंको वेबसाइट वा ब्लग भ्रमण गर्ने वास्तविक बट्स को एक संग्रह हो भनेर वर्णन गर्दछ। भूत रेफरल स्प्याम बट्सको स is्ग्रह हो जुन वेबसाइटलाई बाइपास गर्दछ र गुगल एनालिटिक्स सर्भरमा सिधा हिट गर्दछ। तिनीहरू वास्तवमै तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्दैनन्, र पृष्ठ विचारहरू र सत्रहरू गणना गर्न Google विश्लेषकहरू। यसैले, दुई कोटिहरू एक अर्का भन्दा फरक छन्। जे होस्, ती दुबैले तपाईंको एनालिटिक्स डाटालाई हदसम्म बर्बाद गर्न सक्दछन्।
कसरी यसले हाम्रो वेबसाइटहरू वा ब्लगहरूमा चोट पुर्‍याउन सक्छ?
सबैभन्दा पहिले, मलाई यो स्पष्ट पार्न दिनुहोस् कि गुगल एनालिटिक्स रेफरल स्पाम तब हुन्छ जब ह्याकरहरू वा स्प्यामरहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा नक्कली डाटा पठाउने प्रयास गर्छन्। यो कार्य गर्नका लागि विशेष मापन प्रोटोकोल प्रयोग गर्छन् र ठूलो संख्यामा व्यक्तिको IP ठेगानाहरू संकलन गर्दछन्। तिनीहरू नियमित रूपमा गलत यूआरए एनालिटिक्स खातामा तपाईंको युए ट्र्याकि ID आईडीहरूको सहयोगमा झूटा पृष्ठ दृश्यहरू पठाउँदछन्, उनीहरूलाई कम-गुणवत्ताका वेबसाइटहरू र ब्लगहरूको लागि रेफरल जानकारीको साथ सुपरचार्ज गर्दै।
स्प्यामरहरू र ह्याकरहरूको लक्ष्य भनेको उनीहरूको सम्बद्ध लिंकहरूमा क्लिक गर्न बनाउनु हो, उनीहरूको आफ्नै विज्ञापनहरूबाट धेरै राजस्व उत्पन्न गर्न। तिनीहरूले या त तुच्छ सेवा प्रदान गर्दछ वा संदिग्ध वा संक्रामक पृष्ठहरूमा अन्त गर्न तपाईंलाई बाध्य पार्छ। राम्रो हुन्छ यदि तपाई आफ्नो सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ स्प्यामर वेबसाइट वा ब्लगको भ्रमण नगर्नुहोस्।
के Google एनालिटिक्स स्प्याम हानिकारक छ?
तपाईको वेबसाइटमा कुनै प्रत्यक्ष हानि छैन, तपाईले दिनहुँ प्राप्त गर्नुभएको हिट को सानो रकमको बाहेक। साथै, सर्भरमा बट्स हुन्छ, र SEO रणनीतिहरूले तपाईंलाई स्थायी रूपमा रोक्न मद्दत गर्न सक्दैन। स्पामर्स र ह्याकरहरू खोज ईन्जिन परिणामहरूमा उनीहरूको आफ्नै साइटको श्रेणीकरण र प्रतिस्पर्धा पछाडि तपाइँको वेब पृष्ठहरू धकेल्नु भन्दा बढी अरू केही चाहँदैनन्। यसैले उनीहरूसँग तपाइँको साइटसँग केहि गर्न वा पनी उनीहरूले तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी चोर्ने निर्णय गर्दैन।
के यो वास्तविक ट्राफिक हो?
स्पष्ट हुनको लागि, गुगल एनालाइटिक्स रेफरर स्पाम वास्तविक यातायात होइन। तिनीहरू कहिले पनि तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्दैनन् र निश्चित बट्स मार्फत तपाईंको एनालिटिक्स खाताहरूमा नक्कली अनुरोधहरू पठाउँदैनन्। तिनीहरू रेफरर साइटहरूको सूचीमा देखिन्छ यदि तपाईं एक्ग्जिसभसन> सबै ट्राफिक> रेफरल क्षेत्र जाँच गर्नुभयो भने। तिनीहरूले तपाईंको साइटको बाउन्स दर बढाउँछन् र यसको रूपान्तरण दर कम गर्दछ। स्पामर्स र ह्याकरहरूले केवल कुनै पनि UA-XXXXY-Z सम्पत्ति आईडी उत्पन्न गर्दछ र नक्कली हिटहरू वा इन्टरनेटमा तपाईंको व्यवसायलाई नष्ट गर्न अनुरोध पठाउँदछ।
गुगल एनालिटिक्स रेफरर स्प्यामको सामना गर्न हामी के गर्न सक्दछौं?
तपाईं आवश्यकको साथ सुरू गर्न सक्नुहुनेछ: तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताको सेटिंग्स क्षेत्रमा जानुहोस् र "ज्ञात स्पाइडर र बट्सबाट सबै हिटहरू" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गुगल द्वारा सबै भन्दा राम्रो र प्रख्यात पहल हो, र तपाईं सेकेन्डमा समस्या समाधान गर्न यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र सन्दर्भकर्ताहरूलाई समावेश गर्न वा तपाईंको .htaccess फाईल सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र विन्डो बन्द गर्नु अघि सेटि theहरू बचत गर्नुहोस्।